Uxelela njani xa iVirgo ikuthanda - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nophawu Lomntu
Uxelela njani xa iVirgo ikuthanda
Inokuba yinkohliso encinci xa isiza ngokwazi ukuba iVirgo inomdla wothando kuwe. Abenzi zigqibo ngokungxama ngakumbi xa kuziwaukuphumaokanye ubandakanyeka kubudlelwane bothando. I-Virgos ngokwesiqhelo ayivumeli nabani na asondele kakhulu, kodwa xa bewela umntu, bawela nzima. Ukunyamezela kubalulekile xa unomdla kwiVirgo.
IVirgo iyakuthanda ukuthatha izinto kancinci
NangonaIntombazanabanokutsala kwaye babe neemvakalelo ngawe, bahlala benqabile ukwenza ezo mvakalelo kwaye baya kuhlala belumkile de baqiniseke ukuba iimvakalelo zabo ziyinyani. Baza kuthatha ixesha lokucinga ngamava abo kunye nawe, cwina kwincoko yakho, kwaye uqhubekeke nemvakalelo yabo ngaphambi kokuba bakuxelele ukuba baziva njani. I-Virgos zifuna ixesha lokoyisa ukungakhuseleki kwaye zikhule zikhululekile kunye nawe.
itafile yokugqibela enesibane esakhiwe
Indoda eyiVirgo ethandweni nakubudlelwane
Yintoni etsala iVirgo Man?
Ngaba Indoda eyiVirgo iya kubuya emva koQhawulo-Mtshato?
IVirgo eqhelekileyo icwangciswe ngendlela emangalisayo, inoxanduva, isazela, kwaye inokuzibona sele ineyona nkcukacha zincinci. Abathandi abantu abaphonononga iingqondo zabo kwaye kunokuba nzima ukubazi kuba bakhuselekile. Nangona kunjalo, bakuba besazi ukuba bayakuthemba kwaye udibana nemigangatho yabo ephezulu, baya kuqala ukukuvulela.
Baza kuqaphela izinto ezincinci
Uya kuqala ukuqaphela ukuba banikela ingqalelo kuwe nakwizinto ozithandayo. Xa iVirgo ihoya ngokusondeleyo izinto ezincinci ozithandayo kwaye iqaphela iinkcukacha malunga nawe eziphoswayo ngabanye, kuyaphawuleka. I-Virgos ziingcali ekuboniseni uthando lwabo ngeendlela ezincinci ezinokukonakalisa.
Bayakufuna Ukwazi Oyinyani
Ukuba uqaphela uVirgo emba nzulu ukuze aqonde amaphupha akho, iinkanuko kunye neminqweno, luphawu lokuba banomdla wokwenene kuwe. Okukhona iVirgo ikuthembela kokukhona bafuna ukudlula kwintetho encinci kunye nakwincoko yokwenyani ebenza babone umphefumlo wakho.
Baya kuba sesichengeni
I-Virgos zihlala zigcina izinto ezininzi kubo, bade babe namathandabuzo amancinci malunga nokuxelela usapho kunye nabahlobo babo ukuba yintoni ebaphazamisayo ngomsebenzi wabo okanye ngobomi babo. Nangona kunjalo, ukuba uVirgo uthanda umntu othandana naye, bafuna ukwenza unxibelelwano olukhethekileyo kwaye baya kuvula, babe sesichengeni, kwaye bakuxelele eyona nto isezintliziyweni zabo; kutheni bonwabile, belusizi, okanye bedandathekile, kunye neenjongo zabo eziyimfihlo kunye neminqweno.
iphi imbuyiselo yam yerhafu yombuso
Baza kuphuma kwindawo yabo yokuthuthuzela
I-Virgos ziindlela ezilungeleleneyo, ukungathandi izihlwele, kwaye bayalithanda ixesha labo lokuthula bodwa. Kodwa xa iVirgo iwela wena okanye ikuthandana nawe, baya kuphumela ngaphandle kwendawo yabo yokuthuthuzela, bancame iimfuno zabo ezizezakho, kwaye benze konke abanako ukukwenza wonwabe. Ukubona wonwabile kwanele ukubenza bonwabe nokuba kuchasene nendalo yabo.
I-Virgos ayibaleki emva kothando kwaye ayikhawulezi ukuthandana, kwaye xa zisenza iimvakalelo ekuqaleni zingabongamela. Ewe balumkile, balumkile kwaye banexhala malunga nokwenzakala, kodwa ukuba uba ngumntu onethamsanqa kwisiphelo sokufumanauthando lwabo, zilungiselele ukuthandwa, ukujongwa, ukukhuselwa, ukonakala, kunye nokuzaliswa zizipho kunye nengqwalaselo. Akukho mntu unethenda, onenkathalo, onikayo, kunye noqwalaselo njengeVirgo eluthandweni. Kwaye, babheje kakuhleubudlelwane bexesha elide.
Ngelixa iLanga linika umkhombandlela wokuba iVirgo ibonisa njani ukuba bayakuthanda, UVenus kwaye EyoKwindla ziiplanethi ezinxulumene kakhulu nothando (uVenus) kunye nokwabelana ngesondo (iMars). Zizinto ezikhuthazayo ezikutsalela kubudlelwane obusondeleyo. Ngokudibeneyo bayachaza ukuba utsala njani kwaye ufuna ubudlelwane obusondeleyo. Ngelixa iLanga linokunika umkhombandlela wokuba iVirgo ibonisa njani ukuba bayakuthanda, uVenus noMars, ngokunjaloUmqondiso wakho weLanga, yenza umahluko.
Idayimani Iziseko Uthethathethwano Ring Basics Usana Olusandul 'ukuzalwa Ukugcina Mali Isifrentshi Isigama Ne Ukuguqulelwa
Ukufa Kwinkcubeko Ngaphandle Kwehlabathi
yintoni uphawu lwe-kylie jenner zodiac
Beetroot carrot kunye nejusi yeapile yeziphumo ebezingalindelekanga
ingaba ubungakanani 8 bunjani
kufanelekile ukunxiba ezimnyama emtshatweni
yavela njani ibhulorho yesango legolide igama layo
Ukuqonda Kwaye Ukuzalwanolawulo